Nohamafisin'ny filoha Trump fa misy ambadika politika ny fampitandremana momba ny dia amerikana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nohamafisin'ny filoha Trump fa misy ambadika politika ny fampitandremana momba ny dia amerikana
Tokony hino ny Amerikanina ve ny fampitandremana na torohevitra momba ny dia an-tany amerikana? Tsy dia mieritreritra izany ny filoha Trump.
Nandritra ny taona maro, ny mpanolotsaina momba ny dia ho an'ny Amerikanina dia ahiahiana ho tsy mitombina ary misy ambadika politika. Nanamafy izany ny filoham-pirenena amerikana Trump androany, mety hampidi-doza ny olom-pirenena amerikana amin'ny fanaovana ny torohevitra momba ny dia any Etazonia ho tsy ara-dalàna.
Ho an'i Etazonia, ny famoahana ny fampitandremana momba ny dia amin'ny firenena noho ny antony ara-politika dia toy ny fanambarana ady ho an'ny toekarena sasany.
Ity no antony:
Ny Consulat Général de Japan ao Detroit dia nampitandrina ireo mponina Japoney izay mety handeha ho any Etazonia taorian'ny fitifirana olona maro nitranga tao amin'ny firenena tamin'ny faran'ny herinandro. Ao anatin'ny fanambarana navoakan'ny Ministeran'ny raharaham-bahiny an'i Japon tamin'ny faran'ny herinandro, ny iraka diplomatika dia nampitandrina ny mponina Japoney mba “hahafantatra ny mety hisian'ny trangana basy na aiza na aiza any Etazonia,” izay lazaina ho “fiarahamonina mitam-basy.”
Nilaza tamin'ny The Hill ny filoha taorian'ny nanontaniany momba ny fampitandremana nataon'ireo firenena nanohitra an'i Etazonia ho valin'ny fitifirana vahoaka be natao tato ho ato: Fa raha nataon'izy ireo izany, dia hamaly fotsiny izahay. ”
Ny vao nohamafisin'ny filoha dia ireo torohevitra momba ny dia any Etazonia ho an'ireo Amerikanina hitsangatsangana any ivelany dia mety ho tsy misy dikany fotsiny ary misy ambadika politika.
Ny famoahana ireo mpanolotsaina momba ny dia ho an'ny antony tokana hamaliana faty dia mety hitovy amin'ny fandrahonana fampihorohoroana. Manamafy ny fiheverana nataon'ny fikambanana toa ny UNWTO na ETOA taloha fa ny fampitandremana momba ny dia any Etazonia dia matetika misy ambadika politika.
Ny mpanolotsaina amnesty iraisam-pirenena momba ny dia any Etazonia dia miantso ny olona maneran-tany mba hitandrina ary hanana drafitra tsy ampoizina rehefa mandeha manerana an'i Etazonia. Ity Travel Advisory ity dia navoaka noho ny herisetra mihombo hatrany amin'ny herisetra amina US amerikana am-polony maro ny olona voatifitra tany Chicago isaky ny faran'ny herinandro fotsiny. Ny herinandro lasa teo dia fitifirana olona no voalaza fa tany Ohio sy Texas.
Mampitandrina ny minisiteran'ny raharaham-bahiny alemanina: “lasibatry ny fampihorohoroana i Etazonia Etazonia tato anatin'ny taona vitsivitsy. Mitandrema any amin'ny tanàna be olona sy mandritra ny hetsika manokana. ”
Mampitandrina ny olom-pireneny tsy handehanana any Etazonia ny olom-pirenena amin'ny firenena maro eran'izao tontolo izao, anisan'izany i Venezoela sy Orogoay
Ny Departemantam-panjakana amerikana dia manasokajy ireo firenena amin'ny ambaratonga 4 samihafa, manomboka amin'ny toerana azo antoka ka hatrany amin'ny "aza mivezivezy." Hanazava ve izany i Etazonia fa ny fandehanana any Alemana na Bahamas dia mampidi-doza kokoa noho ny fitsangatsanganana any Brunei izay atahorana ho voasazy ho faty, rantsan-kapoka, karavasy na fanagadrana raha toa ka LGBTQ izy ireo?
Mazava ho azy fa ny Travel Warnings dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany amin'ny firenena. Etazonia ho iray amin'ireo tsena loharano lehibe indrindra ho an'ny fizahan-tany ivelany dia goavana goavambe. Rehefa mampitandrina ny Departemantam-panjakana dia mihaino ny ankamaroan'ny olom-pirenena. Vokatr'izany, tandindonin-doza ny toekarena fizahantany amin'ny firenena kendrena.
Miaraka amin'ny filoha Trump mandrahona fotsiny ny hamoaka fampitandremana amin'ny firenena toa an'i Japon noho ny antony na valifaty dia manaisotra ny maha-ara-dalàna ny fampitandremana momba ny dia any Etazonia. Mety hampidi-doza ny olom-pirenena amerikana izany rehefa tsy fantany raha tokony horaisina am-pahamatorana ny torohevitra momba ny dia na antony ara-politika fotsiny.
Raha hampitombo ny fampitandremana i Japon, tandindomin-doza ny toerana misy an'i Guam sy Hawaii, satria ny fizahan-tany avy any Japon no antony lehibe iankinan'izy ireo.
Walmart: Mbola mivarotra basy izahay taorian'ny famonoana olona marobe tao amin'ny El Paso Store anay